Usuku My Pet » 4 Izinyathelo Thumela Perfect First Message to a Woman
by Sebastian Harris
4 Izinyathelo Thumela Perfect First Message to a Woman
Igcine ukubuyekezwa: Septhemba. 16 2020 | 4 imiz ufunde
Ingabe ufuna ukuthola owesifazane amaphupho akho ngokusebenzisa ukuphola online? Great, konke onakho ukwenze ukuze usethe iphrofayli ngesinye of amaningi athandwayo ukuphola online sites and abheke amaphrofayli abesifazane ezibhalisiwe.
Musa nje abe look at izithombe zabo. Kuyinto njalo nice ukubheka isithombe esihle kodwa uma ufuna ukuthola uma ungase kwenziwe ngomunye nomunye, kufanele ufunde profile yakhe ubone uma izithakazelo ezifanayo, ukuzilibazisa nezinkolelo.
Uma walunguza umbhangqwana of amaphrofayli futhi wathola okungenani eyodwa intombazane unesithakazelo, sekuyisikhathi ukubhala umyalezo wakho wokuqala kuye. Lokhu ngokuvamile ingxenye lapho amadoda abaningi okungenani oyedwa iphutha. Kungakhathaliseki uma sisondela intombazane inthanethi noma okungaxhunyiwe ku-intanethi, ukuqala ingxoxo ngendlela efanele Kubaluleke kakhulu ukuba zithole.
Ungase uzizwe namahloni ngalokho ngiya ukukubuza manje, kodwa uma uzimisele ukuthuthukisa dating ukuphila kwakho, kufanele aphendule umbuzo olandelayo ngokwethembeka:
Wake yabhala umyalezo wokuqala intombazane owasebenzisile ngaphambi ukuxhumana enye intombazane? Mhlawumbe umyalezo wakho wabheka like lokhu:
Kwadingeka a look at iphrofayela yakho futhi ngicabanga umuhle ngempela.
Uma ngokuvamile ukubhala imilayezo like this, ungenawo bazibuze ukuthi kungani ukuphola imizamo yakho online akuzona ngempumelelo ikakhulukazi. You ngeke kumhlabe umxhwele owesifazane ngokubhala kwakhe isigijimi esifanayo naleso esasishunyayelwa ezinye guys eziyishumi wathumela kuye ngaphambi.
Ukuze sinyuke online ukuphola impumelelo yakho kufanele ukuzibizela wahluka zabantu njalo sebenzisa imigqa efanayo futhi izigijimi ezifanayo zifane. Uma ukuzibizela ahluke, ngeke ube mncintiswano kusaba.
1. Yenza uMlayezo
The iphutha lokuqala ukuthi eziningi amadoda enze Mayelana ukuphola online wukuthi abazi ngisho lisebenzise isikhathi ukubheka igama lakhe langempela, noma okungenani ngezifiso umyalezo naye isidlaliso. Abanye besifazane bangase bazibiza "sweet89" kodwa lokho akusho ukuthi ngeke uthole igama lakhe langempela in profile yakhe dating.
Ngiyibonile eziningi ukuphola amaphrofayli inthanethi abesifazane owabhala phansi igama sabo sangempela endaweni ethile profile, ngisho uma wasebenzisa igama fake njengoba yabo isidlaliso. Ngokubeka in the umzamo ukuthola igama lakhe langempela, ubonisa ukuthi ufundile profile yakhe. A lot of abesifazane ungalithathi kalula futhi uma ungomunye guys ambalwa empeleni obakhathalelayo ngaphezu picture yakhe, zingabantu Washaywa ngokuphelele.
Ngaphezu kwalokho, thina abantu abathanda ukuzwa igama lethu. Ngisho noma kuwukuthi nje umyalezo wakho wokuqala, yena uyozizwa uxhumano kunamandla ngokomzwelo uma ukubhekana wakhe negama lakhe. In case ungazitholi igama lakhe langempela, kufanele okungenani ngezifiso umyalezo wakho naye isidlaliso, esikhundleni usebenzisa abajwayelekile "hey ".
2. Ukuncoma Individual
Kuyini kunconywa kakhulu ongasinika owesifazane? Omunye ukuthi uthembekile nokuthi ngeke uye wezwa million izikhathi ngaphambi. Kungenzeka kakhulu ukuthi owesifazane omuhle an online ukuphola site uthola a lot of imiyalezo evela guys.
Kungenzeka okusezingeni ukuthi bonke ukumtshela indlela enhle futhi cute ungu-. Uma omunye nje insizwa ubhala ngqo line efanayo ukuthi last eziyishumi guys wabhala wakhe, cishe ngeke aphendule. Kuthiwani uma mtshele ukuthi wayecabanga ukuthi muhle, ngoba amehlo akhe green bheka friendly futhi smile kwakhe wenza wena smile too?
Lokho okuthile guys eziyishumi owabhala wakhe ngaphambi akazange athi. Ukunikeza owesifazane kunconywa umuntu njalo kangcono kunokuba ethi Izinto efanayo ukuthi ezinye guys kakade wamtshela. Kubonisa wakhe kahle ukuthi kungani ukhangwa kuye hhayi omunye amakhulu abesifazane naye izithombe pretty.
3. Kungani Yena Special?
Okay, Ngiyazi ukuthi ufuna ukubhala ngoba bakhangwa kuye, noma okungenani isithombe ubonisa in profile yakhe, kodwa yiziphi ezinye izizathu ezenza ufuna ukumazi wakhe? Smile Sorry kodwa nice and ezimhloshana eside akufanele kube nezizathu kuphela kungani ufuna ukumazi owesifazane an online ukuphola site.
Yena uyozizwa ekhethekile uma ushintsha kunconywa yakho jikelele ibe kunconywa siqu, kodwa yena ngeke uzizwe kangcono ngisho uma ukumbhalela izizathu ezimbalwa kungani yena umxhwele wena, ukuthi lutho ngokubukeka kwakhe ngokomzimba.
Uma wengeza eyodwa noma ezimbili zokuthi kungani wena uyamthanda, ukuthi zihlobene ngokuqondile izici zobuntu nokuzilibazisa ukuthi ohlwini profile yakhe, amathuba akho okuthola impendulo positive kuyoba eliphezulu kakhulu.
Abesifazane bafuna ukuzizwa ezikhangayo, kodwa futhi ufuna ukuhlangana amadoda athanda ngaphezu ezibukeka ngayo. Ngokutshela kwakhe isigijimi sakho kuqala ukuthi unesithakazelo ukubukeka kwakhe futhi ubuntu bakhe, wena ukuzibizela ahluke kubo bonke abenzi ukumtshela indlela amuhle, ngaphandle ngisho nokuqaphela iqiniso ukuthi in profile yakhe wabhala singakanani yena uthanda ukuba banakekele abanye abantu.
4. Kungani Ingabe Perfect for Each Other?
Manje wena uke cishe konke okudingayo for the umyalezo wokuqala ephelele. Yinye kuphela isithako ukuthi abakatholakali. Uyazi ukuthi uthanda ukubukeka kwakhe futhi ubuntu bakhe, kodwa ingabe uyazi futhi kungani wena uthanda ubuntu bakhe?
Kuyinto pretty Kusobala ukuthi kungani ukhangwa ubuhle yakhe kodwa akukhona ukuthi kungani ezisobala unesithakazelo ebuntwini bakhe. Ungakwazi Yebo ukubhala ukuthi uyamthanda iqiniso ukuthi esobala, kodwa angayenza kanjani ukuthi isikhathi sakhe ungapheli ibhotela nje up, ngaphandle ngisho okusho ukuthi.
Into last kufanele enzeni ukuze uqedele umyalezo wokuqala uphelele amtshele ukuthi kungani wena uthanda ukuzilibazisa kwakhe futhi ubuntu bakhe. Uma wamtshela ukuthi uyasazisa ugqozi wakhe kokuhamba, ngoba usuvele bahamba lonke Asia futhi ufuna ukuya eNingizimu Melika ngonyaka ozayo, siyobona ukuthi kungani wena ephelele nomunye.
3 Izinto Okufanele Uzazi uma You Want To Him Gingqela
Indlela Yokwenza Long-Ibanga Ubudlelwano Emsebenzini
5 Izinganekwane Dating That wonk 'umuntu ecabanga Are True
Ukugijima Dogs: Ukuvumela Pup Your Akuholele Soulmate Your
3 Secrets to Dating on a Student Budget